कांग्रेसले कोभिड-१९ को अवस्थाबारे प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गर्दै - Kohalpur Trends
२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ‘कोभिड—१९ को अवस्था र कांग्रेसको भूमिका’ विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ । आइतबारदेखि सातै प्रदेशमा जुम प्रविधिमार्फत अन्तरक्रिया गर्न लागिएको हो ।
यसैगरी जेठ ३ गते बिहान १० बजेदेखि गण्डकी प्रदेश र अपराह्न ४ बजेदेखि वाग्मती प्रदेशका जिल्लाको सहभागिता रहने कांग्रेसले जनाएको छ ।
त्यस्तै जेठ ४ गते बिहान १० बजेदेखि प्रदेश नं. २ र अपराह्न ४ बजेदेखि प्रदेश नं. १ का जिल्लाका नेताहरुसँग कांग्रेसले अन्तर्क्रिया गर्ने छ ।
सबै प्रदेशको संयोजन गर्ने जिम्मा सहमहामन्त्री एवम् कांग्रेसको कोभिड—१९ अनुगमन समिति संयोजक डा. प्रकाशशरण महतलाई दिइएको छ ।
Previous Previous post: 2078 Jestha _02
Next Next post: चेल्सीलाई हराउँदै लेस्टरले पहिलो पटक जित्यो एफए कप